ပီးစာ | လေးဝတီ
လေးဝတီ » ပီးစာ
ရခိုင်ပြည်မြောက်ဦး ယှိဟောင်းသမိုင်းဝင်တောင် စစ်တပ်ကရောင်းစား
သို့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်မင်းအောင်လှိုင် ရခိုင်ပြည်ဝန်ကြီး ဦးလှမောင်တင် RNDP ပါတီဥက္ကဌ ဒေါက်တာဦးအေးမောင် ALD ဥက္ကဌ ဦးအေးသာအောင် ရက္ခဝံလက်ဖေါင်ဒေးရှင်းဥက္ကဌ ရခိုင်ပြည်ဥပဒေအဖွဲ့ ချုပ် ရခိုင်ပြည်လူငယ်ကွန်ယက်အဖွဲ့  ရခိုင်ပြည်လူ့အခွင့်အရီးနန့် သဘာဝရင်းမြစ်စောင့်ရှောက်ရီးအဖွဲ့  မြောက်ဦးလူငယ်ကွန်ယက် ရက္ခအလင်းတန်းအဖွဲ့  တခြားအဖွဲ့ အစည်းအားလုံးကို လေးဝတီ အေဒီတာက တဆင့် တောင်းဆိုတင်ပြအပ်ပါသည်။
အကြောင်းအရာ။ ။ ရခိုင်ပြည် မြောက်ဦးမြို. ယှိဟောင်းသုတေသန နယ်မြေဟိ တောင်ကုန်းတိကို စစ်တပ်က ဖြိုခပနာ … Read entire article »
Filed under: ပီးစာ
ဒေါပုံ ရယက အာဏာရလျှင် အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီ၊ (ပီးစာ)
ရန်ကုန်တိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ဇေယျာသီရိရပ်ကွက်၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမှတ်တင်သည် ရုံးဝန်ထမ်းခန့်ထားရေးနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စများကို စီမံဆောင်ရွက်ရာတွင် မိမိအကျိုး၊ မိမိဆွေမျိုးအကျိုးများကိုသာ မိမိသဘောအတိုင်း ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေပါသည်။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအတွင်း ဆိုင်ခန်း(၃) ခန်းငှါးခ ၁၆၀၀၀၀-ကျပ် ရရှိပါသည်။ ရုံးစာရေးအဖြစ် သူနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးသော သဘောင်္ကျင်းရပ်ကွက်နေ ဦးကျော်မင်းအားလည်းကောင်း၊ ဧည့်စာရင်းရေးရန် သူဧ။် ညီအရင်းတော်စပ်သူ ဦးသံလုံး (ရာ အိမ်မှူး) နှင့် ဦးသန်းဆောင်(ဆယ်အိမ်မှူး) တို့ကို မိမိတစ်ဦးတည်းဆန္ဒအလျောက် လစဉ်ထောက်ပံ့ကြေးများပေးပြီး တာ ၀န်ပေးအပ်၊ စာရေးများခန့်အပ်ထားပါသည်။
အုပ်ချူပ်ရေးမှူးမှာ ရပ်ကွက်သ/မ တွင် အတွင်းရေးမှူးတာဝန် ယူထားသူဖြစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှူ လျော့ချရေးစီမံချက်ကို အသင်းမှအကျိူးတူ ဆောင်ရွက်သည့် အနေဖြင့် အသင်းပိုင်ငွေကျပ်သိန်း (၃၀) ကို ရင်းနှီး မြုပ်နှံ ထားပါသည်။ ၄င်းငွေကို ၅% တိုးဖြင့်ချေးပြီး အသင်းသို့ ၂% ကိုသာ ပေးသွင်းပါသည်။ ဇနီးဖြစ်သူ မအေးမြင့်မှာလည်း သ/မ အသင်းဆိုင်ကို မိမိအိမ်သဖွယ် ဖွင့်ချင်အချိန်ဖွင့် ၊ ပိတ်ချင်အချိန်ပိတ်ပြီး ဆိုင်ထဲမှာပင် နှစ်လုံး၊ သုံးလုံး ချဲထီ ရောင်း … Read entire article »
မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအား အာရ်ကန်မောင်လှ ခေါ် ဦးအောင်သန်းနုမှ ပေးစာ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ပြည်ထောင်စုသားတိုင်းရင်းသားများအပါအ၀င် တကမ္ဘာလုံးရှိ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအား သတိပေးတပ်လှန့်နိုးဆော်ခြင်း
ရက်စွဲ-၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၃ရက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် ရှမ်း၊ ချင်း၊ ကချင်၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ကယား၊ ကရင်အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး (၁၃၅) မျိုး စုပေါင်းနေထိုင်လျှက်ရှိကြပါသည်။ ၄င်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုး (၁၃၅) မျိုးထဲ၌ ခေါ်တောဘင်္ဂလီကုလားများ မပါဝင်သည့်အပြင် ခေါ်တောဘင်္ဂလီကုလားများသည် တစ်ဖက်နိုင်ငံ(ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ)၏ စစ်တကောင်းသားလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး အင်္ဂလိပ်အစိုးရခေတ်၊ ဦးနုအစိုးရခေတ်၊ တပ်မတော်အစိုးရခေတ်တို့၌ တရားမ၀င်ခိုးဝင်ရောက်ရှိလာကြသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ အစိုးရ၊ န.စ.က၊ လ.၀.က၊ ရဲတချို့၏ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအပေါ် သစ္စဖောက်မူများကြောင့်လည်း ရခိုင်ဒေသအပါအ၀င် မြန်မာပြည်တခုလုံး ကုလားများအဆမတန် များပြားလာရခြင်း အကြောင်းရင်းလည်း ပါဝင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစိတ်တဒေသဖြစ်သည့် မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ်များ၌ ခေါ်တောဘင်္ဂလီကုလားများ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်နီးပါး လူဦးရေအဆမတန်များပြားမှု၊ ဗလီများ အဆမတန်များပြားမှုကို အထူးအလေးထား ဂရုစိုက်ရမည့်အချိန် ကျရောက်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ခေါ်တောဘင်္ဂလီကုလားများအားလုံး၏ တူညီသောရည်ရွယ်ချက်ကား ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံး (သို့မဟုတ်) တစိတ်တဒေသသည် ငါတို့ ခေါ်တောဘင်္ဂလီကုလားများ၏ နိုင်ငံအဖြစ် ခံစားခွင့်ရရှိရေးအတွက် နည်းမျိုးစုံဖြင့် သွေးနှောကြရမည်ဟု … Read entire article »
မြေပုံမြို့ ရွာသစ်ကေရပ်ကွက်က ကိုမောင်မောင်မှ လေးဝတီသို့ ပီးစာ
ကျွန်တော်နာမည် မောင်မောင်ပါ။ မြေပုံမြို့ရွာသစ်ကေရပ်ကွက်ကပါ လက်ရှိမြေပုံမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိန်ရေ မြေစာရင်းဦးစီးမှူး ဦးသာထွန်းချေစွာ ကျွန်တော့်အဖညီအရင်း ကျွန်တော့်ပထွီး ဖြစ်ပါရေ။ မြေပုံမှာ ကုလားအချင်းချင်း ပြသာနာဖြစ်လို့ ဖမ်းထားစွာကို မြေပုံမြို့ မြေစာရင်းဦးစီးမှူး ဦးသာထွန်းချေမှ မြေပုံမြို့ မ.ယ.က နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ထိုဖမ်းထားသော ကုလားများကို အာမခံပြီး ထုတ်ပီးခပါသည်။
နောက်တချက် ကုလားတိပိုင် စပါးတိကိုလည်း SSS ဒိုင်ပိုင်ရှင် ဦးစိုးနိုင်နှင့် ကျောက်မော်ကြီး ဥက္ကဌရို့အား ရောင်းချထားရေလို့ RSV သတင်းဌာနက တင်ထားရေ သတင်းကိုဖတ်ရရေ အချိန်က ကျွန်တော်ရေ ကျွန်တော့်ပထွီးကို ကကောင်းဒေါသထွက်လားပါရေ။ သတင်းဖတ်ပြီးပြီးချင်း ကျွန်တော်စွာ ကျွန်တော့်ပထွီးကို ဆက်သွယ်မိန်းမြန်းပါရေ။ ဇာအတွက်ကြောင့် ဒေပိုင် လုပ်လည်းမိန်းရေခါ ဒေကိစ္စ သူတစ်ခုလည်း မသိပါလို့ ပြောလာပါေ။ ကျွန်တော်က မသိဆိုကေ ဇာဖြစ်လို့ အင်တာနက်မှာ တင်ရလည်းမိန်းရေခါ မနာလိုလူက လုပ်စွာရာလို့ ပြောပါရေ။ ကျွန်တော်က တချက်ပြောပြပါလို့ ပြောရေခါ ကုလားတိကို အာမခံ စွာလည်း လုံးဝမဟုတ်ကြောင်း ကုလားစပါးတိကို SSS … Read entire article »
ရခိုင်နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်များသို့ နယူးဇီလန်မှ ရခိုင်ပြည်သူတစ်ယောက် အိတ်ဖွင့်ပီးစာ
ရခိုင်နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်များသို့ အနုအညွတ် တောင်းဆိုချက်
လေးစားအပ်တေ အဖရခိုင်ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းရို တကဗာလုံးမှာ ဟိနီရေ မျိုးချစ်ပြည်ချစ်ရို့ ဒေနိ ရခိုင်ပြည်အခြေနေရေ မျက်ရည်စက် ၀ယ်ဆာလွမ်းတောင်မက သွီးချောင်းစီးနီစွာကို လူတိုင်းသိပြီးသာပါရာ ယကေ ပြည်ထဲမှာဟိရေ နိုင်ငံရေးပါတီတိ လူမှု့ရေးအဖွဲ့စည်းတိ ပေါင်းလို့လုပ်နီရေပိုင် ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီမှာ ရှိနီရေ ရခိုင်တော်လှန်ရေးပါတီတိ ရခိုင်နိုင်ငံရေးပါတီတိ ANC'S ပိုင် ကောင်စီတိရေ အေချိန်ခါ မပေါင်းစည်းလိုက်နိုင်ကေ ကိုရို့ပြည်တွက် ငါ အမျိုးသားတော်လှန်ရေး မျိုးချစ်နိုင်ငံရေး ပြောနီရေ ပါတီနိုင်ငံရေး ပါတီတော်လှန်ရေးတိရေ ပုံပြင်ထဲဟိရေပိုင် ဖြစ်လားပါလိ့မေ ဥပမာ အဝေး အလကားရာ ဇာတော်လှန်ရေးချင့် ဆိဆောက်ကရောက် ရီပြင်မှာ အရုပ်ရွီးရေပိုင်ရာ ဆိုရေ စကားရေ ကိုရို့အတွက်ဖြစ်လားပါလိမေ နောက်တခုက ရခိုင်စကားပုံထဲမှာ ရှိပါရေ မုန့်လကြွီ တခံလုံး စားလို့ ချီးတပက်စာ မရဝေ ဆိုရေစကားပါ ထိုနည်းတူ ယင်းစကားပုံတိရေ ကိုရို့ … Read entire article »
၀ံလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်းဒေးရှင်းမှ စေတနာလူမူရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နိန်သူတစ်ယောက်က အိတ်ဖွင့်ပီးစာ
ကျွန်မသည်ဝံလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရး ဖောင်းဒေးရှင်းမှာ စေတနာလူမူရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်မှာ ဇွန်လအရေးအခင်း ကာလကပင် ဖြစ်ပါရေ၊ ၀ံလက်ငှက်သည် မျိုးနွယ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ မိမိအသိုက်အမြုံကို ခင်တွယ်ခြင်းနှင့် မည်သည့်အရပ်ဒေသတို့ကို ရောက်ရှိစေကာမှု မိမိဇာတိရပ်မြေသို့ အလည်လာတတ်သည့်ငှက်ဖြစ်သည်။ အမျိုးနှင့်သီလကို စောင့်ရှောက်သော ရခိုင်လူမျိုးတို့သည် လည်းကောင်း၊ လူသားမျိုးနွယ် အချင်းချင်းသော်လည်းကောင်း ကူညီစောင့်ရှောက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ၀ံလက်ဖောင်ဒေးရှင်းဟု ခေါ်တွင်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
စစ်တွေဆေးရုံတွင် အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူနေရသော မြောက်ဦး၊ ကျောက်တော်၊မင်းပြား၊ မြေပုံ၊ ကျောက်ဖြူမြို့မှ လူနာ၃၀ လောက် (ဒဏ်ရာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် မြှား၊လှံ၊ဓါး) ရောက်ရှိနေကြပါသည်၊ ၀ံလက်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဆေးကုသစရိတ်များရရှိရန်နှင့် သောင်းချီ အိမ်ခြေပျက်စီးသွားသော အိမ်ခြေမဲ့များအတွက် လမ်းလျှောက်အလှူခံ ၄ ရက်တိုင်တိုင်မြို့လုံးကျွတ် ရခိုင်လူငယ်များ အလှူခံခဲ့ပါသည်။
အဝေးရောက်သူငယ်ချင်းများလည်း တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ရန် mail ပို့လိုက်ပါရေ၊ အလှူငွေ ပါဝင် လှူဒါန်းလိုလျှင် … Read entire article »
ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ်မှ ဒုတိယပါမေက္ခချုပ်သည် အဂတိလိုက်စားသော အထက်အရာရှိများနှင့် ပူးပေါင်းကာ အဝေးသင် တက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်းတွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင် ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုခြင်းတွင် ကျပ်သိန်ပေါင်း ၂၅၀၀၀၀၀ (နှစ်ဆယ့်ငါးသိန်း) လာတ်စားမှုရှိခဲ့တယ်။
ဒါ့အပြင် ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဆရာ/မ များအား ကျောင်းမတက်ဘဲ အပြင်တွင် အဝေးသင်ကျောင်းသား/သူများကို ကျူးရှင်ပြနေကြသည်ဟု စွပ်စွဲခြင်း၊ အမှန်တကယ်က သူကိုယ်တိုင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း(ဆယ်တန်း)နှင့် အဝေးသင်ကျောင်းသား/သူ အချို့ကို အိမ်တွင်ခေါ်ကာ ကျူရှင်သင်နေသည်ကို လူသိမှာ၊ လူတွေပြောမှာကို စိုးရိမ်ပြီး ရှိရှိသမျှ ဆရာ/မ တွေကို ၀ါးလုံးရှည်ဖြင့် လှမ်းရိုက်ခြင်းပုံစံဖြစ်သည်။
သြဂုတ်လ တတိယအပတ်ကဆိုရင်(ယခု သြဂုတ်လ) သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်ဌာနတွေကို လိုက်ပြီး အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ကျောင်းမတက်နိုင်ပဲ ခွင့်ယူထားသော ဆရာ/မ တွေကိုဆိုရင် ကျောင်းချိန်မှာ ကျူရှင် ထွက်သင်နေ ကြတယ် ပါမောက္ခ ဌာနမှူးများ ဒီကိစ္စကိုမသိကြဘူးလား၊ ပါမောက္ခဌာနမှူးလုပ်ပြီး ဒီလောက်တောင် အသုံးမကျဘူးလား---------! … Read entire article »
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံသို့ အိပ်စာပေးစာ
ဒကာတော်သမ္မတကြီး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာပြီး ဘေးရန်အပေါင်းမှ ကင်းဝေးပါစေကြောင်းနှင့် လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများကိုလည်း ကျော်လွှားနိုင်ပါစေလို့ ဦးဇင်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်….
ဦးဇင်းကိုယ်တိုင် မိမိရဲ့ဆန္ဒကို လာရောက်ပြောကြားချင်ပေမယ့် အခွင့်အရေးနည်းပါးသော ဦးဇင်းလို ရဟန်းငယ်တပါး အတွက် စာပို့ခွင့်ရတာကိုပဲ အားရကျေနပ်မိပါတယ်….
ဒကာတော်သမ္မတကြီးခင်ဗျား... ရခိုင်ပြည်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အဓိကရုဏ်းနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ဦးဇင်းရဲ့အမြင်တချို့ကို အကြံပြုတင်ပြပါရစေ.... ယခုဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ရခိုင်ပြည်နယ်၏ အဓိကရုဏ်းမှာ ရခိုင်ပြည်သူတို့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်က အားကစားသမားကောင်းတို့ ရှိအပ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးလို့သာ ယူဆပါတယ်၊
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့......ရခိုင်ပြည်သူတို့သည် အနိုင်မခံ၊ အရှုံးမပေးသော စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာ သော လူမျိုးတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုတာ... ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ၊ ဆရာတော်ဦးစန္ဒြမဏိ ၊ ဆရာတော် ဦးစိန္တာ၊ အစရှိတဲ့ ရခိုင်စံပြဆရာတော်ကြီးများ... သမိုင်းသုတေသီ ဦးသာထွန်း၊ ဦးရွှေဇံအောင်အစရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းက သက်သေပြနေတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်..... ရခိုင်ပြည်သူတို့သည် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ကိုယ်တော်တိုင် … Read entire article »
နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ သိစေရန် (ပေးစာ)
ရခိုင်ပြည်နယ် ကုလား အရေးအခင်းနှင့် ပါတ်သတ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်နေသော သံတွဲမြို့အခြေအနေများ …
သံတွဲမြို့ပေါ်တွင် ညမထွက်ရ အမိန့်ပုဒ်မ (၁၄၄) ထုတ်ပြန်ထားလျှက်ရှိပြီး ညထွက် သွားလာနေသောသူ (၁၀) ယောက်ကျော်ခန့်အား တရားစွဲထားပါတယ်။ အခုအချိန်တွင် ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ သံတွဲမြို့ခေါင်းဆောင် (ရဲအောင်လံကားဂိတ်) ကျော်ကျော်မှာ သံတွဲမြို့ အဏ္ဍာဝါတွင် နေထိုင်သော ဗျူဟာမှူးမှ သံတွဲမြို့နယ်အတွင်း သွားလာခွင့်ပြုသည်ဟု တပ်မတော် တံဆိပ်ရိုတ်နှိပ်ပြီး လက်မှတ်ထိုး ထုတ်ပေးထားသည်ကို သံတွဲမြို့ ဌာနဆိုင်ရာများ အသိဖြစ်ပါသည်။ ၄င်း ကျော်ကျော်သည် ဂေါက်ကွင်းတွင် ဗျူဟာမှူးဆိုသူအား ချဉ်းကပ်ဝင်ရောက်ကာ ဂေါက်အတူရိုက် သောက်စားပြီး ည (၈) နာရီကျော်ခန့်တွင် သံတွဲမြို့ ဒွါရာဝတီကွက်လပ်နေ ဦးဘိုစိန် (ရိုဟင်ဂျာ) ဆိုင်တွင် သောက်စားမူးရစ်ပြီး အချိန်မတော် အိမ်ပြန်တတ်ပါသည်။ တံတားတွင်တပ်၊ ရဲလုံခြုံရေးများနှင့် မြို့တော်ခန်းမတွင် တပ်လုံခြုံရေးဂိတ်အား ကျော်ဖြတ်ကာ ဗျူဟာမှူးမှ သံတွဲမြို့အတွင်း … Read entire article »
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ပရောက် ရခိုင် ရဟန်းတော်များ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက် စာတစ်စောင် ထုတ်ပြန်
ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ကျောက်နီမော်ကျေးရွာမှ ရခိုင်အမျိုးသမီးငယ် မသီတာထွေးအား မူဆလင်ကုလားများက မုဒိမ်းကျင့်ပြီး သတ်ဖြတ်ခဲ့ရာမှ စတင်ဖြစ်ပွါးလာခဲ့သော လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခသည် ယခုအခါ ရခိုင်ပြည်နယ် အနှံ့အပြားတွင် ဖြစ်ပွားလျက် ရှိနေပါသည်။ ထိုမုဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခံရမှု ပြဿနာကို သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များက အချိန်မီ ထိရောက်စွာ ဖြေရှင်းပေးခဲ့လျင် ဤမျှလောက် ပြဿနာကြီးထွားလာဖွယ် မရှိဟု ထင်မိပါသည်။
ဂိတ်ပေါက်လေးပေါက်ရှိသော အိမ်တစ်အိမ်တွင် ဂိတ်ပေါက်သုံးပေါက်ကိုသာ လုံခြုံစွာပိတ်ထားနိုင်သော်လည်း ကျန်ဂိတ်ပေါက်တစ်ပေါက်ကို လုံခြုံစွာမပိတ်ထားနိုင်ခဲ့ပါလျင် ထိုအိမ်တစ်အိမ်လုံးအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိနိုင်သလို ထိုအိမ်တွင်နေထိုင်ကြသော မိသားစုများအတွက်လည်း ပြင်ပကဝင်ရောက်လာသော ပြဿနာများကြောင့် အချိန်မရွေး စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာများနှင့် ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်။
အလားတူပင် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြားသော နယ်စပ်ဒေသများကို လုံခြုံစွာ ပိတ်ထား နိုင်ခဲ့သော်လည်း ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မောင်တောမြို့နှင့် ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျ နယ်စပ်ကို လုံခြုံစွာမပိတ်ထားနိုင်ခဲ့သောကြောင့် ဤသို့သော လူမျိုးရေးပြဿနာများ ပေါ်ပေါက်လာရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော လူမျိုးရေးပဋိပက္ခသည် နောင်တွင်လည်း အချိန်မရွေး ပေါက်ကွဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သလို ယနေ့ ဘာသာခြား တိုင်းတစ်ပါးက ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်လူမျိုးတို့အား ခြိမ်းခြောက်နေမှုသည် နောင်တစ်နေ့တွင် … Read entire article »
Filed under: ပီးစာ, သတင်း
ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ရခိုင်သူရခိုင်သား ရဟန်း၊ရှင်၊လူ အားလုံးသို့ အိပ်ဖွင့်ပီးစာ
အို… ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ရခိုင်သူ ရခိုင်သား ရဟန်း၊ ရှင်၊ လူ ပြည်သူအပေါင်းရို့ ရခိုင်ပြည်ကြီးတွင် ခေတ်အဆက်ဆက် မကြုံဖူး မကြားဖူးခရေ ရခိုင်အမျိုးသမီးငယ်တစ်ယောက်ကို တိုင်းတစ်ပါးမှ ခိုးဝင်နီထိုင်လာရေ မူဆလင်ကုလားတိက မုဒိမ်းကျင့်ပနာ အသီသတ်ဖြတ်ခြင်း ဆိုရေ တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုသည် ဒေဂနိ ရခိုင်ပြည်၌ ကြုံတွိ့နီရပါဗျာယ်။
ယင်းပိုင် မဒိမ်းကျင့်သတ်ဖြတ်ခံရမှုကို နိုင်ငံတော်အစိုးရက အချိန်မီထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်အရေးယူခြင်း မရှိစွာက စတင်ခရေ ပြဿနာရေ ဒေဂုအခါ မောင်တောမြို့နန့် ကျေးရွာများတွင် အိမ်ခြေပေါင်းများစွာကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခံရရေပိုင် လူပေါင်းများစွာလည်း အသတ်ခံကြရသည်။ ယင်းပိုင် မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခြင်း ဘေးရန်မှ ထွက်ပြီးလို့ ဇာနီရာသို့ ရောက်နီကတ်ရေဆိုစွာကို မသိရရေပိုင် ယင်းလူတိ အသက်ရှင်လို့ ရှိမရှိဆိုစွာကိုလည်း ဇာသူကလဲ မသိရှိရဘဲ လုံခြုံမှုကင်းမဲ့စွာ ပျောက်ဆုံးနိန်ကြသည်ဟု သိရှိရပါရေ။
ယင်းပိုင် ရွာပေါင်းများစွာ မီးတိုက်ခံရခြင်း၊ လူပေါင်းများစွာ အသတ်ခံရခြင်း စရေ ပြဿနာတိသည် ဒေဂုအခါ စစ်တွေ၊ ပေါက်တော၊ ကျောက်တော်၊ ရမ်းဗြဲစရေ မြို့နယ်တိကိုလည်း ကူးစက်ဖြစ်ပွါးလျက် ဟိနီစွာကို အားလုံးသိပြီးကတ်ပါယာ။ ထိုသို့ … Read entire article »
လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေသော မောင်တော၊ စစ်တွေ အဓိဂရုဏ်းအတွင်း ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ ပြည်သူများအတွက် ပါဝင် ကူညီလှုဒါန်းလိုသော အလှူရှင်များအနေဖြင့် ဆက်သွယ်ရန် ဌာနများ
အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မောင်တော/ ဘူးသီးတောင် ဒေသတွင်း လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းမှာ အိုးအိမ် ဆုံးရှုံးသွားရသောသူများသည် နေထိုင်ရန် နေရာနှင့် အစားအသောက်များ အလွန်တရာ အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေကြရသည်။
အခက်အခဲကြုံနေရသူများ ယာယီအဆင်ပြေမူ ရှိစေရန် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း များတွင် ရှိသော ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းတွင် နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။
နေထိုင်သူများ စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေစေရန်လည်း နီးစပ်ရာဒေသခံများမှ တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးလျက်ရှိပါတယ်။
သို့ပါ၍ မိမိတို့ တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်လှုဒါန်းလိုသူများ အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ နေရာဌာနများတွင် ဆက်သွယ်လှုဒါန်းနိုင်ကြောင်း တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။
၁။ ။ စင်္ကာပူ ရခိုင်အသင်း
ပျက်စီးဆုံးရှုံးမူများကို အချိန်မှီ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်နှင့် အနေအထိုင်အစားအသောက်များကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်ရန် စင်ကာပူနေ မြန်မာများမှ အလှူငွေ ထည့်ဝင်လိုသူများ စင်ကာပူ ရခိုင်အသင်းမှ တာဝန်ယူ ကောက်ခံပြီး အမြန်ဆုံး ပို့ပေးနေပါတယ်။
အလှူငွေများကို အကောင့်နံပါတ် (Posb Savings 133-23288-5) သို့ တိုက်ရိုက်လွှဲပို့နိုင်ပါတယ်။ လှူဒါန်းငွေ ပမာဏကို အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များအား အလှူရှင်နာမည်နှင့်တကွ ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ အထူးကျေးဇူးတင်လျက်….။ (စင်ကာပူ ရခိုင်အသင်း)
အသေးစိတ် သိလိုပါက ဆက်သွယ်ရန် … Read entire article »
Filed under: ပီးစာ, သတင်း, ကြော်ငြာချက်
သို့ရက်စွဲ့ (2/4/2012)
ရခိုင်ပြည် ဘူးသီးတောင်မြို့ မှာ ဘူးသီးတောင်မဲဆန္ဒနယ် က ပါဝင်လို့ အနိုင်ရလားရေ ဘူးသီးတောင်မြို့ နယ်
ကြံဖွံ့ ပါတီက ဒေါက်တာ ဘိုရှီးရ်အာမတ် ဆိုသူရေ အမတ်မဖြစ်ခင် သူကိုယ်တိုင် မိမိနိန်အိမ် သပြေကုန်းရပ်ကွက် ဘူးသီးတောင်မြို့ မှာ ဒေါက်တာ တယောက်ဖြစ်ခပါရေ။
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လားရေ နောက်ပိုင်းကစလို့ ဆီးခမ်းကို သူကိုယ်တိုင် မထိုင်ဘဲ မယားဖြစ်သူ
နန့် လွှဲအပ်ထားပြီးကေ ဆီးကုသနိန်ပါရေ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဘိုရှီးအာမတ်က လွှတ်တော် အမတ်
ဖြစ်လားခရေ လောက်ကပင် ဘူးသီးတောင်မှာ ပြည်သူတိ အမှုတခုခုဖြိုက်လာကေ ရဲစခမ်းနန့်  တရားရုံး
ကို လားစရာမလို သူကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းပီးမေလို့ သူ့ နောက်လိုက် ပွဲစားတပည့် တိဖြစ်တေ ဟာဂျီအဘူ၊ အာမတ်ဟူဆင်း၊ အာမိန် ဆိုသူရို့ နန့် အမှုတိကို တဖက်သတ် လာဒ်စားလို့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပီးနိန်ပါရေ
ယင်းနောက် နယ်ကရွာတိကို တဆင့် ခံပွဲစားတိနန့် လေး ကွင်းဆင်းစည်းရုံးလို့  အမှုရှာ အမှုတိုင်ထားရေ
လူတိကိုလေး ခြိမ်းခြောက်လို့ ရဲကိုမတိုင်ကေ … Read entire article »
ရခိုင်ပြည်ဝန်ကြီး ဦးလှမောင်တင်ဘားကို အိပ်ဖွင့် ပီးစာ
ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးလှမောင်တင်ဘားသို့နိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံ ဥပဒေကို ချိုးဖေါက်ဗြီး မသိနားမလည်ကြသောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနင့် ပတ်သက်၍ မေတ္တာရပ်ခံခြင်း
ရက်စွဲ - ၃၀-၃-၂၀၁၂
အကြောင်းအရာ ။။ ။။ မတ်လ( ၂၉ ) ရက်နိက ပြည်နယ်လွှတ်တော် အစီးအ၀ီးမှာ မန်အောင်မြို့ နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်- ဒုလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သည် ဦးသာညွန့် ၏ ခေတ်စနစ်နင့် မညီရေအတွက် ရခိုင်အလံနင့် ရခိုင်အမျိုးသားဝတ်စုံပြင်ဆင်ရေးကိစ္စ ၊ လေးစားစွာဖြင့် ။။ ။။ ဤကိစ္စနင့် ပါတ်သက်၍ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ရောက်ရှိနေထိုင်သော ကျွန်တော်ရို့ ရခိုင်လူမျိုးရို့ မှာ အထူးပင် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါသည် ။ ရခိုင်လူမျိုးရို့ မှာ အမျိုးသီလ -နှစ်ဋ္ဌါနကို - စောင့်စွမ်းနိုင်သည် - အမည်နာမ-ဘွဲ့ မည်လှနင့် -အန္တတသညာ ခေါ်အပ်ရာတည်းလို့ - အရှင်နာဂိန္ဒက ကဗ္မည်းမော်ကွန်း ထိုးထားခပါသည် ။ အမျိုးသီလ ဆိုသည်မှာ … Read entire article »
ဆရာမ ဒေါ်အေးနုစိန် ဥပဒေ အထက်တန်းရှေ့ နေ(စစ်တွေ).....။
လေးဝတီ သတင်းဌါနက တဆင့် ဖြန့်ဝီပီးပါရန် အနူးအညွတ်ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
အကျွန် မစောသန်းကြည်(၁၈)နှစ် သည်(အဖ) ဦးမောင်ရွှေနု၏ သမီးတယောက်ဖြိုက်ပါသည်၊
အကျွန်ကျောက်ဖြူမြို့  မင်းဂံအုပ်စု မင်းဂံရွာမှာ မိဖနန့်အတူ လယ်ယာလုပ်ကိုင် နိန်ထိုင်သူ တယောက်လည်း ဖြိုက်ပါသည်၊အကျွန်နန့် တရွာတည်း နိန်ထိုင်သူ ဦးသန်းရွှေ(၁၈)နှစ် (အဖ)
ဦးမောင်ဝေနီ၏ သားဖြစ်သူ (ရ ယ က) စာရေးဆိုသူသည် လွန်ခရေ နှစ်နှစ်ကျော်က (၁၃၇၁)ခုနှစ်က အကျွန်ဗွီဒီယို ကြည့်လို့အပြန်မှာ အကျွန့်လိုင်ဖင်းရမျိုကို ဓါးနန့်ထောက်ဗျာယ် ဒေါ်စံရွှေခင်
အိမ်ကိုဆွဲတင်လို့ ဗလက္ကာယ ပြု့ ကျင့်ခပါသည်၊
ယင်းအကြောင်းနန့်အကျွန်သည် မိခင်ဖြိုက်သူ ဒေါ်မခင်ဦးနန့် ကွမ်းချောင်းရဲစခန်းကို လားရောက်တိုင်ခပါသည်၊ကွမ်းချောင်းရဲစခန်းက (ရယက)စာရေးဦးသန်းရွှေကို ခေါ်ယူလို့ နောက်နောင် မလုပ်ရန် ဂတိဝန်ခံချက်နန့် လက်မှတ်ရေးထိုးခပါသည်၊ လက်မှတ်ရေးထိုး အပြီးမှာ ကွမ်းချောင်းရဲစခန်းက တရားခံကို အရေးမယူဘဲ ပြန်လွှတ်ပစ်ခပါသည်၊ အကျွန်ရို … Read entire article »
ခိုင်အာဏာနီသို့ အိပ်ဖွင့်ပီးစာ (၁)
လူကြီးမင်း၏ (ALP) သို့ အိပ်ဖွင့်ပီးစာနန်(့ALP) ဥက္ကဌ ခိုင်ရဲခိုင်သို့ အိပ်ဖွင့်ပီးစာ(၂)ကို ဖတ်ရပါသည်။ ပြောသင့်ပြောထိုက်စော်ကို ပြောရေလို့ ယူဆသည်။
ယေဇူးနန်း အကျွန်ပြောဖို့ စော်က ပုံပြင်ချေတပုဒ်ရာဖြစ်ပါယင့်။ ပုံပြင်က ရှိအခါက ရွာတရွာမှာ ရွာသူကြီးတယောက်နန့် ဆိုက္ကားသမားတယောက်ရို့  နိန်ထိုင်ဂတ်ပါရေလတ်။ တရက်နိန့် ခါ ရွာသူကြီးအိမ် က အငှါးသား အလုပ်မအားရေအတွက် ရွာသူကြီးကိုယ်တိုင် မြက်ရိပ်လားရပါရေ။ မြက်တိကို နှစ်ထုံး ထုံးလို့ ထမ်းဖိုနန့် မြက်နှစ်ထုံးတဖက် နောက်တဖက်က မြက်နန့်အလီးတူ ကျောက်တုံး တလုံးကို အလီ ချိန်လို့ ထမ်းယူခပါရေလတ်၊လမ်းတဝက်လောက်ကို ရောက်တေခါ ဆိုက္ကာသမားနန့် တွိဂတ်ပါရေလတ် ၊ယေခါဆိုက္ကားသည်က အေးလားရွာသူကြီး အကျွန်စကားတခွန်း ပြောချင်ပါရေ။ ပြောခွင့်ပြုပါလို့ဆိုပါရေ လတ်။ ယင်းခါ ရွာသူကြီးက ပြော… ပြော… လို့ပြောရေခါ၊ အော်… ရွာသူကြီး ကျောက်တုံးကိုပစ် ချလိုက်ကေ မြက်နှစ်ထုံးကို တဖက်တထုံးစီချိုင်လို့ ထမ်းကေ တ၀က်ပေါ့လားဘာဖို့ လို့ပြောဘာရေလတ်။
ယေခါ ရွာသူကြီးက အေးဝေး… မင်းအကြံပီးစော် ကကောင်း … Read entire article »
Filed under: Uncategorized, ပီးစာ